Mahotera matsva eAdina eMelbourne anozivisa kusarudzwa kukuru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Mahotera matsva eAdina eMelbourne anozivisa kusarudzwa kukuru
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
TFE Hotera yakazivisa General Manager kugadzwa kumahofisi ayo matsva ehotera muMelbourne
Adina Apartment Hotel Melbourne South Bank uye iyo Adina Apartment Hotel West Melbourne vanodana vatungamiriri vatsva
TFE Mahotera anoramba aine chivimbo mukumutsidzira kwekushanya kweMelbourne
Kudzoka kwakasimba kunotarisirwa mumusika wepakati-uye wepakati pekuzorora sezvo zvirambidzo zvichiramba zviri nyore
TFE Mahotera akazivisa General Manager kugadzwa kumahofisi avo maviri matsva emahotera muMelbourne - Adina Apartment Hotel Melbourne South Bank uye Adina Apartment Hotel West Melbourne.
Lucy Ockleston akagadzwa hotera General Manager we 99-kamuri Adina Apartment Hotel West Melbourne mudhorobha kumusoro-uye-kunouya kunoyevedza 'West End' precinct. Ms Ockleston akatanga neTFE kuNew Zealand muna 2011 kuTravelodge Wellington kwaakafambira mberi kubva pachinwiwa chekudya nechinwiwa kuenda kuna Assistant Hotel Manager. Akave nemabasa akakosha kuTravelodge Sydney uye iyo Travelodge Hotel Newcastle uye akapedza kudzidza kuTFE's ACADEME Management Hutungamiri Chirongwa.
Adina Apartment Hotel Melbourne Southbank yakagadza Nigel Maxey pachinzvimbo cheManeja General Hotel uye Emma Jarrett kune anokosha anotsigira chinzvimbo Assistant Hotel Manager.
Mr.Maxey ane ruzivo rwakakura mukugamuchira vaeni sevose vari vaviri General Manager wehotera uye nyanzvi yezvokudya nezvinwiwa, kusanganisira mabasa paWerribee Mansion uye saGeneral Manager weJasper Melbourne. Mr Maxey vakatanga zvavo TFE Hotele basa mu2018 rinoshanda pamhando dzakasiyana dzemhando - Adina, Travelodge, Rendezvous, Vibe uye Iyo Savoy - kuenda naye kuVictoria, South Australia neTasmania yeGroup.
Mumwe akapedza kudzidza kuTFE's ACADEME Management Hutungamiri Chirongwa, Emma Jarrett akabatana neTFE Mahotera mu2013 uye akagamuchira mubayiro weTFE wemukati we'Zviitiko Zvakanaka Nguva Dzese 'muna2019. Collins, uye yaimbove yakavakirwa muQueensland kuAdina Apartment Hotel Brisbane Anzac Square kwenguva semubatsiri weManeja Hotel.
Inomiririra yakanakisa-tsika yakasvibirira-dhizaini, iyo 220-kamuri Adina Apartment Hotera Melbourne Southbank ndiyo yekutanga kuAustralia matanda akavezwa matanda akakwirira hotera. Yakagadzirwa naBates Smart, iyo hotera inokanda mabhokisi ese - kwete kungogadzikana-kuchenjera - asi yenzvimbo nenzvimbo yevaenzi.
TFE Hotera inoramba iine chivimbo mukumutsidzirwa kwekushanya kweMelbourne uye iri kutarisira kudzoka kwakasimba mumusika wepakati nepakati pezororo sezvo zvirambidzo zvichiramba zvichireruka.